မြန်မာအင်ဂျင်နီယာများ အမည်ရှေ့တွင် ENGR. ဟု တပ်ဆင်သုံးစွဲနိုင်တော့မည်
ပို့စ်တင်ချိန် - 6/18/2013 12:12:00 PM
ဆေးပညာရှင် များ ဒေါက်တာဟု အမည်ရှေ့တွင် တပ်ဆင်သုံးစွဲသကဲ့သို့ အင်ဂျင် နီယာကောင်စီ အသိအမှတ်ပြု အင်ဂျင်နီယာများ၏ အမည်ရှေ့ တွင် Engr. ဟု တပ်ဆင်သုံးစွဲနိုင် ရန် မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအ သင်းက အစီအစဉ်များပြုလုပ် နေကြောင်း သိရှိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာ အသင်း က ကမကထ ပြုလုပ်ရေးဆွဲပြီး မကြာမီ လွှတ်တော်များ သို့တင်ပြမည့် မြန်မာနိုင်ငံအင် ဂျင်နီယာကောင်စီ ဥပဒေမူကြမ်း တွင် အဆိုပါအချက်ကို ထည့်သွင်း ထား ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယင်းကဲ့သို့ အမည်ရှေ့ထည့် သွင်းသုံးစွဲခြင်းများကို နိုင်ငံတကာ တွင်လည်း ကျင့်သုံးနေပါကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်း ပြန်ကြားရေးမှူးဦးကိုကိုက ရန် ကုန်တိုင်းမ် သို့ ပြော ကြားသည်။ ထိုဥပဒေသာ အတည်ဖြစ် ပါက မြန်မာနိုင်ငံတွင် အင်ဂျင် နီယာလောကအတွက် မိမိကိုယ် မိမိထိန်းကျောင်းပြီး အရည်အ သွေးမြှင့် တင်ရေး ဆောင်ရွက်ပေး မည့် ပထမဆုံးသောကောင်စီ တစ်ရပ် ပေါ်ထွန်းလာမည်ဖြစ်သည်။ အခန်း(၁၄)ခန်းပါ မြန်မာ နိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီဥပဒေ မူကြမ်း ကို ရေးဆွဲ ပြုစုပြီး ဖြစ်ကာ အသင်းဝင်များ၏ အကြံဉာဏ် များကိုရယူရန်ရှိကြောင်းလည်း မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်း မှသိရှိရသည်။
ထိုဥပဒေမူကြမ်းတွင် အင်ဂျင်နီယာများအား မှတ်ပုံတင် အင်ဂျင်နီယာလက်မှတ်၊ မှတ်ပုံ တင် အကြီးတန်းအင်ဂျင်နီယာ လက်မှတ်၊ မှတ်ပုံတင်အင်ဂျင် နီယာပညာရှင် လက်မှတ်၊ မှတ်ပုံ တင်ကန့်သတ်အင်ဂျင်နီယာလက် မှတ် စသည်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာကောင်စီက အသိ အမှတ်ပြုလက်မှတ်များထုတ် ပေးနိုင် မည် ဖြစ် သည်။
ထို့အပြင် ကောင်စီက အင်ဂျင်နီယာကျင့်ဝတ်သိက္ခာနှင့်အ ညီ လိုက်နာစောင့်ထိန်းရန် ပျက် ကွက်မှုများကို စုံစမ်းခြင်း၊ စစ်ဆေး ခြင်းနှင့် အရေးယူဆောင်ရွက် ခြင်းများ ပြု လုပ်နိုင်မည်ဟု သိရသည်။
အဆိုပါကောင်စီ ဥပဒေမူ ကြမ်းအား အသင်းသားများအား လုံး ပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်ရန် အသင်း သားစုံညီ အထူးအစည်းအဝေး ကြီးကို ဇွန် ၂ဝရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့ လှိုင်တက္က သိုလ်နယ်မြေရှိ မြန်မာနိုင်ငံအင် ဂျင်နီယာအသင်း၌ ကျင်းပမည် ဖြစ်ရာ အသင်းသားအားလုံးမ ပျက် မကွက်တက်ရောက်ကြပါရန် မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာ အသင်း က နှိုးဆော်ထားသည်။